WARARKA MAANTA: August 3:
Seminaaro ku saabsan dacwada oo lagu soo gabagabeeyay Gaalkacyo
Wadankee ugu nolol wanaagsan aduunka?
Dagaallo gobolka Doollo ku dhexmaray shacab reer Ogaadeenya ah
Waxaa lagu soo gabagabeeyay masaajidda Salaxudiin iyo Dulqarnayn ee magaalada Gaalkacyo 02-3/08/2004 Seminaarro ku saabsan dacwada oo muddo shan bari ah uga kala socday masaajiddaas 60 daaci iyo 60 daaciyadood oo ka mid ah ducaadda magaalada Gaalkacyo. Seminaarradaan waxaa looga jeeday in lagu hormariyo dareenka dacwadeed ee ducaadda, in sare loo qaado xilkasnimada ducaadda, in ay isbartaan ducaaddu isuna kaashadaan khayrka, in sare loo qaado hanka, hal abuurka iyo waxqabadka ducaadda, in la xoojiyo aqoonta iyo wacyiga ducaadda, in la xoojiyo isjacaylka iyo isku duubnida ducaadda iyo in la dardar galiyo dacwada magaalada Gaalkacyo. Waxaa labadas Seminaar durus ka bixiyay culimo ay ka mid ahaayeen: Sh. C/laahi Cali Xaashi, Sh. Jaamac C/salaan Warsame, Sh. Shariif Maxamed Shariif C/raxmaan, Sh. Xuseen Cigaal Canshuur, Sh. Bashiir Jaamac Kite, Sh. C/raxmaan Max’ud Warsame, Sh. C/casiis M. Cali M. Axmed iyo Sh. Axmed C/samed. Duruusta lagu qaatay Seminaarkaasna waxaa ka mid ahaa: Usuusha dacwada, Sifooyinka daaciga, Xugunka dacwada, fadligeeda iyo ahmiyaddeeda, Iskaashiga dacwadeed, Wadiiqooyinka dacwada, Akhlaaqda wanaagsan. Xafladdii xiritaanka Seminaaradaas ayaa lagu guddoonsiiyay abaalmarino dhiirrigalin ah ducaadii ku guulaysatay tartankii aqooneed ee la qabtay. Macalimiintii Seminaarka duruusta ka bixisay ayaa sheegay in dhammaan ducaaddii kaa soo qaybgashay Seminaarka ay muujiyeen dadaal dheeraad ah oo ku dayasho mudan xagga joogtaynta duruusta, sida ay uga faa’iidaysteen duruusta iyo talooyinka wax ku oolka ah ee ay soo gudbiyeen si loo hormariyo dacwada. Gabagabadii xafladdana waxaa culimadu aad iyo aad ugu boorriyeen ka soo qaybgalayaasha inay dadaalkooda labanlaabaan dhinaca waxbarashada, dacwada iyo hormarinta dadkoodaba.
Ugu dambayn xafiiska dacwada iyo tarbiyadu wuxuu ugu baaqayaa dhammaan dadweynaha Soomaaliyeed inay isu kaashadaan faafinta cilmiga, dacwada iyo guud ahaan horumarinta bulshada, wuxuna ka rajaynayaa magaalooyinka kale inay kaga daydaan reer Gaalkacyo tillaabooyinkaas wanaagsan.
Mahad Celin kusocota Culimadii Nadwada Ku Qabatay Gaalkacayo
Waxaa jira warbixin sanadle ah oo ay soo saarto hayàda UNDP-da ( Unided nations development program). Warbixintaas oo la yiraahdo: Horumarka baniàadamku sameeyey ama: (The human development report), waxaa lagu lagu lafaguraa arrimo badan oo ay ka mid yihiin: Wax soo saarka wadan uu leeyahay kolkii loo eego ilaha dhaqaalaha, heerka waxbarashada dadka wadankaas ku nooli inta ay gaarsiisan tahay, horumarka xagga caafimaadka laga sameeyey, mushaharka shaqaalaha la siiyaa inta uu leégyahay, celceliska da`da dadku inta ay gaarto, horumarka xagga siyaasada iyo weliba arimo kale oo badan.
Warbixintaas waxaa lagu eegaa dhamaan wadamada aduunka iyadoo la isticmaalayo halbeegyada aan kor ku soo sheegnay. Waxaa keliya oo ay warbixintu ka tagtaa wadamada aan laga haynin wax keyd warbixineed ah. Badanaaba waa wadamada loogu yeero. "Failed states" ama wadamo wax walba ku guuldaraystay.Wadamadaan loogu yeeray kuwo guul dareystay waxaa kaalinta kowaad kaga jira Soomaaliya sidaas darteed laguma soo qaadan warbixintan.
Waxaa warbixintaas wadamada ugu nolosha wanaagsan aduunka kaalinta kowaad iyo labaad ka galay wadamada Norway iyo Iswiidhan, waa sida ay u kala horeeyaane. Wadanka Norway ee kaalinta koowaad galay ayaa ay tahay sanadkii saddexaad ee uu kaalintaas galo. Iyadoo saldhig looga dhigay arimaha aan kor ku soo sheegnay sida dhaqaalaha, waxbarashada, caafimaadka, mushaharooyinka, siyaasada iwm ayuu Wadanka Norway noqday wadanka ugu wanaagsan ee lagu noolaado aduunka. Haddii la eego dadweynaha reer Norway waxaa wax qora waxna akhriya cadad gaarayo ilaa boqolkiiba sagaashan iyo sagaal ( 99%). Kolkii la eego xagga caafimaadka, kunkii qofba waxaa ay haystaan cadad dhaqaatiir oo gaareysa 413 dhakhtar. Celceliska da`da dadku waxaa ay gaartaa ilaa 78 sanno.
Kolkii la eego wadamada ugu nolosha liita aduunka waxaa safka hore kaga jira wadamo badan oo Africaan ah. Waxaana heerka kowaad galay wadanka Congo ee horey loo oran jirey Zaire. kaalinta labaad, waxaa buuxisey The central African republic, tan saddexaadna wadanka Itoobiya.
Abdirisak Maxamed xuseen
WARARKII RADIO XORRIYO EE MAANTA:::
.Dagaallo gobolka Doollo ku dhexmaray shacab reer Ogaadeenya ah
.Dagaal labo urur iskaga hor yimaadeen oo ka dhacay Kililka Herarida.
.Dagaalo lagu jabiyay ciidamada gumaysiga Itoobiya.
WARARKII AGOOSTO 1